Tilmaanta waalidiinta ee bilaashka ah ee cusboonaysiinta sawir-qaadista internetka-faafka cudurrada - Abaal marin
Bogga ugu weyn Blog Tilmaanta waalidiinta ee bilaashka ah ee cusboonaysiinta internetka-cudurka faafa ee faafa
Fiidiyowyo Gaaban oo ku saabsan Badbaadinta Carruurta
Hubinta taleefanka casriga ah
Dib ugu celi Maskaxda Ilmahaaga
Buugaagta Carruurta Yaryar
Illo badan oo bilaash ah oo loogu talagalay waalidiinta
Kheyraadka soo kabashada ee diinta ku saleysan
Kahor intaadan bilaabin sahamintan ku saabsan halista ku xeeran galmada, aan xasuusano sababta ay lagama maarmaanka u tahay. Waxaan dooneynaa in caruurtu ku koraan si ay u yeeshaan cilaaqaad dhow oo farxad leh, kalgacal leh. Halkan ka daawo video soo jiidasho leh, "Waa maxay jacayl?" si ay noo xasuusiso waxa ay u egtahay ficil ahaan.
Adiga waalid ahaan iyo daryeel bixiyeyaal waxaad tihiin kuwa ugu mudan ee lagu daydo iyo isha hanuuninta carruurtaada. Ilaa da'da 18, ugu yaraan, adiga ayaa mas'uul ka ah wanaaggooda. Tilmaamahan waalidiinta ee ku saabsan sawir-gacmeedka qaawan ee internetka ayaa kaa caawin doona inaad dareento kalsooni kugu filan inaad yeelato wadahadalladaas adag. Baro wax ku saabsan dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee galmada, saameynta jireed, iyo saameynta xun ee filimada. Aqoontaani waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka ilaaliso caruurtaada waxyeelooyin kala duwan oo ay soo ogaadeen xirfadlayaasha caafimaadka iyo kumanaan isticmaaleyaashii hore. Waxaan ku soo daraynaa qayb ka mid ah galmada iyo saamaynta sharciyeed ee adiga iyo ilmahaagaba.
Inta lagu jiro aafada, caajiska wuxuu u ogolaanayaa xitaa caruur badan shilal ama naqshad, inay la kulmaan sahay aan dhammaad lahayn oo qaawan oo adag. Ilaa aad adigu naftaada wax u barato, ka dibna carruurtaada (carruurtaada), oo ku saabsan saamaynta ay ku yeelan karto caafimaadka maskaxda iyo jidhka, ka dib markaa waxaa jira halisayo cunuggaaga inuu ku dhaco dhibaatooyinka la xiriira galmada mustaqbalka. Waan ka xumahay inaad noqon taban, laakiin tani waa hubin dhab ah. Dadka qaangaarka ah ayaa ah kuwa ugu nugul inuu ku dhaco dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda iyo balwadaha waqtiga. Halkan waa wanaagsan video gaaban waxaa qoray dhakhtarka cilmu-nafsiga ee naxdinta leh oo ka hadlaya la-qabsashada aafada.
Cilmi-baaris ka socota Guddiga Ingiriiska ee Kala-saaridda Filimada
Marka loo eego tan cilmi laga bilaabo 2019, carruurta da'doodu tahay 7 iyo 8 waxay ku turunturoodeen filimada qaawan ee adag. Waxaa jiray 2,344 waalid iyo dhalinyaro kaqeyb qaadanayay cilmi baaristan.
Inta badan dhalinyarada markii ugu horeysay daawashada filimada sawir qaadista waxay ahaayeen shilal, in ka badan 60% carruurta 11-13 ee arkay sawir-gacmeedka iyagoo sheegaya in daawashada sawir-gacmeedyada ay tahay mid aan ula kac ahayn.
Carruurtu waxay ku sifeeyeen inay dareemayaan "si qasab ah" iyo "jahwareer", gaar ahaan kuwii arkay sawir-gacmeedka markii ay ka yaraayeen da'da 10.
In kabadan nus (51%) oo ah 11 ilaa 13 sano jir ayaa kuwarbixiyay inay arkeen qaawan mar uun, oo kusii kordheysa 66% da'da 14-15.
83% waalidiinta ayaa isku raacay in kontaroolada xaqiijinta da'da ay ahaato meel loogu talagalay sawirada qaawan ee internetka
Warbixinta ayaa sidoo kale muujisay kala duwanaanshaha u dhexeeya aragtida waalidiinta iyo waxa dhabta ah ee carruurta la kulmayaan. Saddex meelood (75%) ee waalidiinta ayaa dareemay in ilmahoodu uusan ku arki laheyn qaawan qadka internetka. Laakiin carruurtooda, in ka badan kala badh (53%) ayaa sheegay inay xaqiiqdii arkeen.
David Austin, Madaxa Fulinta ee BBFC, wuxuu yiri: “Pornography hadda hal ilbiriqsi ayey u jirtaa carruurta da’ kasta leh ee ku nool Boqortooyada Midowday, cilmi-baaristaan ​​waxay taageertaa cadeymaha sii kordhaya ee muujinaya inay saameyn ku yeelaneyso sida dhalinyarada ay u fahmaan xiriirka caafimaad, galmada, muuqaalka jirka iyo ogolaanshaha. Cilmi-baaristu waxay sidoo kale muujineysaa in carruurta yaryar - xaaladaha qaarkood markay da'doodu tahay toddoba ama siddeed sano jir - marka ugu horreysa ay ku daawadaan sawir-gacmeedka qaawan ee internetka, inta badan maahan ula kac. "
Inta badan carruurta iyo waalidiinta la wareystay waxay rumeysan yihiin in xaqiijinta da'da ay ka hor istaageyso carruurta inay si kama 'ah u arkaan sawir-gacmeedka da' yar, ayna dib u dhac ku keeni karto da'da ay la kulmayaan.
83% waalidiinta la daraaseeyay waxay isku raaceen in ay jirto kontoroollo xaqiijin da 'ah oo loogu talagalay porno online ah. Cilmi baarista ayaa sidoo kale muujisay in dadka dhalinyarada ah ay rabaan xaqiijinta da'da - 47% caruurta ayaa dareemay xaqiijinta da'da inay tahay fikrad wanaagsan, iyadoo 11-13 sano jir ay ka doorbidayaan dhalinyarada da'da weyn.
Caadaysiga filimada qaawan wuxuu awood u leeyahay inuu sababo dhibaatooyinka soo socda:
Dareemid xanaaq markaan awoodin inaad gasho lebbiska
Liiska kore waxaa laga soo qaatay buugga “The Trap Trap”Waxaa qoray Wendy Malz In kastoo intooda badani ay la xiriiraan dhalinyarada qaangaarka ah iyo dhalinyarada waaweyn, qaarkoodna carruurtu way la kulmaan.
Qaan-gaarnimada, carruurtu waxay bilaabaan inay si gaar ah u xiiseeyaan galmada waxayna doonayaan inay wax ka bartaan sida ugu macquulsan. Sababta Sababta oo ah muhiimadda koowaad ee Dabeecadda waa taranka galmada, gudbinta hidda-wadaha. Oo waxaa naloogu talagalay inaan diirada saarno, diyaar ama maya. Internetku waa meesha ugu horeysa ee caruurtu ka bilaabaan inay raadiyaan jawaabo.
Wiilashu waxay u isticmaalaan boggaga internetka in ka badan gabdhaha, gabdhahana waxay doorbidaan barta warbaahinta bulshada waxayna aad u xiiseeyaan sheekooyinka mowjadaha, sida 50 Shades ee Grey. Tani waa khatar gaar ah oo loogu talagalay gabdhaha. Tusaale ahaan, waxaan maqalnay gabar 9 sano jir ah oo soo degsatay oo akhrinaysa majaajillo sheeko ku saabsan Kindle. Tani waxay ahayd inkasta oo hooyadeed ku rakibtay xannibaado iyo kontaroolo dhammaan aaladaha kale ee ay marin u leedahay, laakiin aan ahayn Kindle.
Dhallinyaro badani waxay yiraahdaan waxay jeclaan lahaayeen waalidkood inay si firfircoon ugala xaajoodaan ka hadalka waxyaabaha qaawan. Haddii aysan gargaar ku weydiisan karin, xaggee bay aadayaan?
Websaydhka ugu weyn uguna caansan Pornhub waxay kor u qaadeysaa fiidiyoowga walaaca ku abuura sida galmada galmada, xarig, jirdil, kufsi iyo gangbangs. Jinsi waa mid ka mid ah noocyada ugu dhaqsaha badan ee kobaca sida waafaqsan Pornhubwarbixinnada u gaarka ah. Intooda badani waa bilaash oo si fudud loo heli karo. Pornhub waxay u aragtaa aafada inay tahay fursad weyn oo lagu xiri karo isticmaaleyaal badan waxayna si bilaash ah ugu helayaan boggooda caymiska (inta badan la bixiyo) ee dhammaan waddammada.
Haddii aad leedahay ilmo loo qiimeeyay inuu ku jiro qaybta 'autism spectrum', waxaad u baahan tahay inaad ka warqabto in ilmahaagu qatar ugu jiro inuu la qabsado sawir-gacmeedyo ka badan carruurta neerfaha. Haddii aad ka shakisan tahay inuu ilmahaagu ku jiro shaashadda, waxay ahaan lahayd fikrad fiican inaad haysatid la qiimeeyay haddii ay suurta gal tahay. Ragga dhalinyarada ah gaar ahaan ASD ama baahida waxbarasho ee gaarka ah ayaa si aan kala sooc lahayn loogu matalay tirakoobka dembiga galmada. Waxay ku dhacdaa ugu yaraan 1-2% dadka dadka guud ahaan, baahsanaanta dhabta ah lama oga, haddana in ka badan 30% dambiilayaasha galmada ku jira shaashadda ama dhibaatooyin xagga waxbarashada ah. Halkan waa a warqad cusub nin dhalinyaro ah khibradiisa. Nala soo xiriir si aan ugu helno warqadda haddii loo baahdo.
Cudurka 'Autism spectrum disorder' waa xaalad neerfaha ku timaadda dhalashada. Ma aha cilladda caafimaadka maskaxda. In kasta oo ay tahay xaalad aad ugu badan ragga, 5: 1, dheddiguna sidoo kale way yeelan karaan. Wixii macluumaad dheeraad ah ka akhriso baloogyadan porno iyo autism; sheeko hooyo; iyo autism: dhabta ama been abuur?
Fiidiyowyo gaagaaban oo ku saabsan badbaadinta carruurta
Daqiiqadan 2, oo dhalaalaysa animation waxay bixisaa dulmar guud oo deg deg ah waxayna taageertaa baahida degdegga ah ee hirgelinta sharciga xaqiijinta da'da si loo ilaaliyo carruurta. Waad u tusi kartaa carruurtaada sidoo kale maaddaama aysan ku jirin filimada qaawan. Waxaad sidoo kale warqad u qori kartaa xubintaada baarlamaanka meelkasta oo aad joogtid kana dalban karto dowlada inay dhaqan galiso sharciga si loo abuuro sharci lagu xaqiijinayo da'da si caruurtaada looga ilaaliyo qadka.
Hadalkan TEDx “Galmada, Filimada iyo Ragga“, Professor Warren Binford, oo u hadlaya hooyadiis iyo macallinkeedaba, wuxuu si fiican u muujinayaa sida lebbisku u saameeyo carruurta. Hadalkan TEDx ee Professor Gail Dines “Ku barbaarinta dhaqan galmo leh”(13 daqiiqo) wuxuu si qayaxan ugu sharaxayaa sida fiidiyowyada muusikada, baraha xunxun iyo baraha bulshada ay u qaabeynayaan galmada caruurteena maanta.
Waa tan sheeko qosol badan TEDx (16 daqiiqo) oo loo yaqaan “Siddee U Qaadi Doontaa Porn Skews?”Waxaa qoray hooyo Mareykan ah iyo baraha galmada Cindy Pierce. Tilmaanta waalidkeed waxay sheegaysaa sababta sheekaysiga socda ee carruurtaada ku saabsan galmada ay aad ugu baahan yihiin iyo waxa xiisaynaya. Hoos ka eeg macluumaad dheeri ah oo kusaabsan sida loo yeesho wada sheekaysigaas.
Caruurta ilaa lix jirka ah waxay galaangal u leeyihiin qaawan. Carruurta qaarkood ayaa xiiseeya oo aad u raadsada wax intaa ka sii badan, qaarna waa ku murugaysan yihiin oo riyooyinku waa qarow. Sheyga culus ee qaangaarka ah kuma habboona carruurta da 'kasta ha noqotee sababtoo ah marxaladooda koritaanka maskaxda. Waa tan a Warbixin oo la cusbooneysiiyay sanadkii 2017-kii oo la yiraahdo "… Ma aanan ogeyn inay caadi ahayd in la daawado a" baaritaan tayo iyo qiimeyn ah oo ku saabsan saameynta sawir-gacmeedka qaawan ee internetka uu ku leeyahay qiyamka, dabeecadaha, caqiidooyinka iyo dabeecadaha carruurta iyo dhallinyarada. ” Waxaa ka wakiishay Jaamacadda Middlesex Jaamacadda NSPCC iyo Wakiilka Carruurta ee England iyo Wales.
La soco sida caqabad ku ah is-xakamaynta ay ugu tahay dhalinyarada. Kani waa hadal wanaagsan oo loo yaqaan 'TEDx' Kuleylka xilliga: Saameynta kacsiga galmada ee ku saabsan go'aan gaarista galmada.
Waxaan kugula talineynaa inaad daawato muuqaalkan cusub. Waad awoodaa daawo tareenka bilaashka ah on Vimeo. Waa dokumentiyo ay sameeyeen waalidiinta, oo ku dhaca filim sameeyayaal, loogu talagalay waalidiinta. Waa dulucda ugu fiican ee arrinta aan soo aragnay oo leh tusaalooyin waaweyn oo ah sida loo yeesho wadahadaladaas adag ee lala yeesho carruurtaada.
Daawashada fiidiyowga gundhigga ah wuxuu ku kacayaa and 4.99 oo keliya waana lacagta ugu badan ee la kharash gareeyay ee aad rajeyn karto. (Wax lacag ah kuma helno talobixintan.) Qaar badan oo khabiiro ah iyo ilaha aan kugula talineyno tilmaamahan waalidiinta ayaa sidoo kale ka muuqda dukumintiga. Rob iyo Zareen ayaa galiyay lacagtooda iyo qibradooda oo dhan inay ka dhigaan tan inay u noqoto adeeg waalidiinta kale, marka fadlan iibso hadaad awoodo. Mahadsanid. Haddii aadan rabin inaad qarash gareyso wax lacag ah, waxaa jira fiidiyowyo kale oo heer sare ah oo ka hooseeya oo bilaash ah.
"Ha eedeyn oo ceeb ha sheegin" cunug loogu daawado qaawan. Meelkastaba waa khadka tooska ah, lagusoo bandhigo warbaahinta bulshada iyo fiidiyowyada muusikada. Way adkaan kartaa in laga fogaado. Ilmaha kale waxay u gudbiyaan si qosol ama bravado ah, ama waxaa dhici karta in cunuggaagu ku turunturoodo. Waxaa laga yaabaa inay dabcan si firfircoon u raadiyaan sidoo kale. Kaliya ka mamnuucida cunuggaaga daawashada waxa kaliya ee ay ka dhigeysaa mid tijaabiya, maxaa yeelay sida hadalka hore uu yidhi, 'miro la mamnuucay dhadhanka ugu macaan'.
Carruurtu uma baahna hal hadal oo weyn oo ku saabsan galmada. Iyaga waxay u baahan yihiin wada hadalo badan waqti ka badan inta ay sii marayaan sanadaha dhallintayar. Midkastaba ha ahaado mid da 'ahaan ku habboon, caawimaad weydiiso haddii aad u baahatid. Aabaha iyo hooyooyinka labadooduba waxay u baahan yihiin inay ka ciyaaraan door waxbaridda naftooda iyo carruurtooda ku saabsan saameynta farsamada maanta.
Wax ka qabashada dibad-baxyada: Carruurtu waa laga yaabaa inay marka hore mudaharaadaan, laakiin carruur badan ayaa noo sheegay inay jeclaan lahaayeen waalidkood inay ku soo rogaan bandoo iyaga oo ay siiyaan xuduudo cad. Ilmahaaga wax camal ah kama samaynaysid adigoo uga tagaya 'macno ahaan' aaladooda.
Recent cilmi waxay soo jeedinaysaa in miirayaasha kaligood aysan ka difaaci doonin carruurtaada inay galaan galitaanka qaawan ee internetka. Tilmaamahan waalidiinta wuxuu xooga saarayaa baahida loo qabo in khadadka wada xiriirka uu furnaado sida ugu muhiimsan. Ka dhigista kaftanka mid adag in la helo hase yeeshe marwalba waa bilow wanaagsan gaar ahaan carruurta yaryar. Waa mudan tahay in la dhigo filtarrada dhammaan aaladda internetka iyo hubinta on a joogto ah in ay shaqeynayaan. Ka hubso Childline ama bixiyahaaga internetka wixii ku saabsan talobixinta ugu dambeysa ee shaandhaynta.
Barafasoor hore ee cilmiga bulshada, qoraa iyo hooyo, Dr Gail Dines, waa aasaasaha Dhaqanka Reframed. Eeg hadalkeeda TEDx “Ku barbaarinta dhaqan galmo leh”(13 daqiiqo). Iyada iyo kooxdeeda waxay soo saareen qalab bilaash ah, oo ah habka ugu fiican ee wax lagu barto kaas oo ka caawin doona waalidiinta inay kor u qaadaan carruurta ladnaanta u adkeysta. Sida wadahadalka loo yeesho: eeg kan Dhaqanka Wareegsan Barnaamijka Waalidiinta.
Kani waa buug cusub oo ay qortay Colette Smart, hooyo, macalinkii hore iyo cilmi nafsi yaqaanka loo yaqaan "Waa hagaagi doonaan“. Buuggu wuxuu leeyahay 15 tusaale oo wadahadal ah oo aad la yeelan karto carruurtaada. Websaydhku sidoo kale wuxuu leeyahay wareysiyo TV-ga waxtar leh oo qoraagu la wadaagayo fikrado muhiim ah sidoo kale.
Dib-u-dhigi cunugaaga xitaa smartphone ama kiniin ilaa iyo inta suurtogalka ah. Telefoonada gacanta ayaa micnaheedu yahay inaad joogi karto xiriirka. In kasta oo ay u muuqato inay abaalgud u tahay shaqada adag ee laga qabtay dugsiga hoose ama hoose in ilmahaaga loo soo bandhigo taleefan casri ah oo galaya dugsiga sare, u fiirso waxa ay ku samaynayso gaadhitaankooda tacliimeed bilaha soo socda. Carruurtu runti ma u baahan yihiin marin 24-ka-maalin ah oo ay ku helaan internetka? In kasta oo carruurtu laga yaabo inay helaan shaqooyin badan oo guriga laga soo diro oo internetka ah, isticmaalka madadaalada miyaa lagu xadidi karaa 60 daqiiqo maalintii, xitaa tijaabo ahaan? Waxaa jira barnaamijyo badan si loola socdo isticmaalka internetka gaar ahaan ujeeddooyinka madadaalada. Caruurta ah 2 sano iyo wixii ka yar waa inaysan isticmaalin shaashad gabi ahaanba.
Diidi internetka habeenkii. Ama, ugu yaraan, ka qaad dhammaan taleefannada, kiniiniyada iyo aaladda ciyaarta qolka jiifka canuggaaga. La'aanta hurdo soo celinta ayaa sii kordheysa walbahaarka, diiqadda iyo walwalka carruur badan maanta. Waxay u baahan yihiin hurdo dhan oo habeen ah, uguyaraan sideed saacadood, si ay uga caawiyaan inay dhexgalaan barashada maalinta, kana caawiyaan inay koraan, macno u yeeshaan shucuurtooda iyo inay wanaag dareemaan.
U ogoloow carruurtaada taas Porn waxaa loogu talagalay by dhowr dollar billaabay shirkadaha tiknoolajiyada si ay "jillaab" isticmaalayaasha iyagoon ka warqabin inay sameystaan ​​caadooyin kuwaas oo ka celinaya inay ku soo noqdaan wax badan. Waa wax walba oo ku saabsan feejignaantooda. Shirkaduhu waxay iibiyaan oo ay la wadaagaan macluumaadka dhow ee ku saabsan rabitaanka isticmaaleyaasha iyo dabeecadaha ay u leeyihiin dhinacyada saddexaad iyo xayeysiiyeyaasha. Waxaa loo sameeyay inay noqoto mid la qabatimo sida ciyaaraha khadka tooska ah, khamaarka iyo warbaahinta bulshada si looga ilaaliyo isticmaaleyaasha inay dib ugu soo laabtaan wax badan isla marka ay caajistaan ​​ama walaac dareemaan
Waxaa jira barnaamijyo badan iyo barnaamijyo taageero. Ikydz waa barnaamij u oggolaanaya waalidiinta inay kormeeraan isticmaalka carruurtooda. Ilaaliyaha Galiyaha ogeysiiyaa waalidiinta marka sawir shaki leh uu ka muuqdo aaladda cunugooda. Waxay ka hadlaysaa khataraha ku saabsan galmada.
daqiiqad waa app bilaash ah taas oo u oggolaanaysa qofka inuu kormeero isticmaalkiisa khadka tooska ah, xad u yeelo oo u helo nudges marka uu gaadhayo xadkaas. Isticmaalayaashu waxay u janjeeraan inay dhayalsadaan adeegsigooda farqi aad u weyn. Barnaamijkani wuu la mid yahay laakiin bilaash maaha. Waxay ka caawisaa dadka inay dib u bilaabaan maskaxdooda iyagoo kaashanaya wadada. Waxaa la yiraahdaa Brainbuddy.
Waa kuwan qaar ka mid ah barnaamijyada kale ee laga yaabo inay waxtar leeyihiin: Indhaha Axdiga; Bark; NetNanny; Mobicip; Xakamaynta Waalidka ee Qustodio; WebWatcher; Norton Family Premiere; OpenDNS Home VIP; PureSight Multi. Muuqaalka barnaamijyada liiskan kama dhigna oggolaansho Hay'adda Reward Foundation. Kuma helno waxtar dhaqaale xagga iibinta barnaamijyadan.
Buugga ugu fiican suuqa waa sarkaalkeenna cilmi baarista sharafeedka Gary Wilson. Waxaan dhihi lahayn taas, laakiin waxay u dhacdaa inay run tahay. Waxaa loo yaqaan "Maskaxdaada on Porn: Farshaxanka Internetka iyo Sii-saarka Soogalootiga”. Sidoo kale waa hage waalid weyn. Sii carruurtaada si ay u akhriyaan maadaama ay leedahay boqollaal sheekooyin ah oo ay leeyihiin dhallinyaro kale iyo halgannada ay u hayaan galmada. Kuwo badan ayaa bilaabay daawashada lebbiska internetka iyagoo da 'yar.
Buugga waxaa lagu heli karaa warqad qoraal ah, Kindle ama buug maqal ah. Xaqiiqdii nooca maqalka ah ayaa BILAASH looga heli karaa Ingiriiska halkan, iyo dadka ku nool USA, halkan. Waxaa la cusbooneysiiyay Oktoobar 2018 si loo tixgeliyo aqoonsiga Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee aqoonsiga nooc cusub oo lagu ogaanayo cudurka "Ciqaabta Anshax xumada Galmada ee khasabka ah“. Tarjumaadaha waxaa lagu heli karaa Dutch, Carabi iyo Hangari ilaa iyo hadda, iyadoo kuwa kale ay ku jiraan dhuumaha.
Dhakhtarka Maskaxda ee Carruurta Dr Victoria Dunckley ee "Dib u celi ilmahaaga maskaxda"Iyo iyada bilaash ah blog Sharax saamaynta waqtiga badan ee shaashadda ee maskaxda ilmaha. Muhiimad ahaan waxay dejineysaa qorshe waxa waalidku sameyn karaan si ay uga caawiyaan ilmahooda inuu mar kale ku socdo wadada saxda ah.
Dr Dunckley ma go'doomin isticmaalka sigaarka laakiin wuxuu diiradda saarayaa isticmaalka internetka guud ahaan. Waxay sheegtay in ku dhowaad 80% carruurta ay aragto aysan qabin cilladaha caafimaadka dhimirka ee laga soo sheegay lagana daaweeyay, sida ADHD, laba-cirifoodka, niyad-jabka, walwalka iwm laakiin ay leeyihiin waxa ay ugu yeertay 'shaashadda elektaroonigga ah. '' Cilladdaan cilladaysan waxay la mid tahay astaamaha qaar badan oo ka mid ah cudurradaan dhimirka ee caadiga ah. Arimaha caafimaadka maskaxda badanaa waa la daaweyn karaa ama la yareyn karaa iyadoo laga saarayo aaladaha elektarooniga ah muddo ku dhow 3 toddobaad inta badan, carruurta qaarkood waxay u baahan yihiin waqti dheer ka hor inta aysan dib u bilaabin isticmaalka laakiin heer aad u xaddidan.
Buuggeedu wuxuu kaloo sharxayaa sida waalidku tan ugu samayn karo tilmaamaha tallaabo-tallaabo ee tilmaamaha iyadoo lala kaashanayo dugsiga ilmaha si loo hubiyo iskaashiga ugu wanaagsan ee labada dhinac ah.
Cilmiga cilmu-nafsiga bulshada caan ku ah Professor Philip Zimbardo iyo Nikita Coulombe waxay soo saareen buug aad u fiican oo la yiraahdo Nin gooyay oo ku saabsan sababta ragga dhalinyarada ahi maanta u halgamayaan iyo waxa aan ka qaban karno. Way ballaadhisaa oo cusbooneysiisaa Zimbardo hadalkiisii ​​caanka ahaa ee TED “Dhimashadii Guys”. Iyada oo ku saleysan cilmi baaris adag, waxay dejineysaa sababta ay raggu uga baxayaan tacliinta iyo inay ku fashilmaan bulsho ahaan iyo galmada dumarka.
Hamish iyo Sirta Shaxda. Kani waa buug cusub oo uu qoray Liz Walker carruurta da'doodu tahay 8-12 sano.
Baro wax ku saabsan caafimaadka, sharci ah, waxbarashada iyo xiriirka Saamaynta isticmaalka sawirrada qaawan Abaalmarinta Abaalmarinta websaydhka oo ay la socdaan talo ku saabsan joojinta.
Eeg sida Dhaqanka Wareegsan Barnaamijka Waalidiinta waxay ka caawisaa waalidiinta inay la macaamilaan isbeddelada dhaqameed ee hadda jira iyo saameynta ay ku leeyihiin carruurta.
Fahmitaanka sida ay caqabad ugu noqon karto jimicsiga is ilaalin. Fiidiyoow qosol leh oo uu sameeyay dhakhtarka cilmi nafsiga sare.
Ka-hortagga dabeecadaha galmada ee waxyeelada u leh isticmaale-saaxiibtinimada qalab ka socda Lucy Faithfull Foundation.
La dagaallama daroogada cusub Sida loogala hadlo carruurtaada wixii ku saabsan porn.
Isticmaalka joogtada ah ee sawir-gacmeedka internetka ee carruurtu waxay qaabeeyaan maskaxda ilmaha, qaabkooda kacsiga galmada. Waxay saameyn weyn ku leedahay galmada iyo internetka. Walaaca waalidiinta waa inuu noqdaa saameynta sharci ee ka imaaneysa cunugooda horumarinta dhibaatooyinka qaawan ee filimada taasoo keenta dabeecad galmo waxyeello u leh dadka kale. Tani Page ka socota Kooxda Khabiirka oo ay u magacawday Dawladda Scottish dhaqan-galmo waxyeello u leh carruurta dhexdeeda ayaa tusaale ka bixinaysa dabeecadahaas oo kale. Halkan ka eeg sidoo kale macluumaad muhiim ah oo ku saabsan galmada, aargoosiga qaawan iwm oo ay sii kordheyso dacwadda ay booliisku qaadaan. Ku galmoodka gudaha Scotland. Galmada gudaha England, Wales iyo Waqooyiga Ireland.
Eeg ka hortagga dhaqanka xun ee galmada ee ka hortagga xadgudubyada lidka ku ah carruurta Lucy Faithfull Foundation qalab ku wajahan waalidiinta, daryeelayaasha, xubnaha qoyska iyo xirfadleyda. Hay'adda Reward Foundation ayaa lagu xusay inay tahay isha caawimaadda.
Boqortooyada Midowday (UK), booliska waxaa looga baahan yahay sharci ahaan inay ogaadaan wixii fal galmo ah ee ku dhaca nidaamka Taariikhda Dembiyada Booliska. Haddii cunugaaga lagu qabto sawirro anshax xumo ah oo uu ku qasbay inuu helo ama u gudbiyo dadka kale, waxaa dacwad ku soo oogi kara isaga ama iyada booliska. Sababtoo ah dambiyada galmada waxaa si aad ah ugu tixgeliya booliska, dembigaas galmada ah, ee lagu diiwaangeliyey nidaamka taariikhda dambiyeed ee booliska, waxaa loo gudbin doonaa loo-shaqeeyaha mustaqbalka marka la hubiyo jeeg sare loo codsado in lala shaqeeyo dadka nugul. Tan waxaa ka mid ah shaqo iskaa ah.
Galmada galmada waxay umuuqataa qaab aan waxyeello lahayn oo haasaawaha ah, laakiin haddii ay tahay mid dagaal badan ama xoog wax ku muquunisa, saameynta waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa mustaqbalka fog ee mustaqbalka mustaqbalka shaqada canuggaaga. Filimada qaawan ee joogtada ah waxay adeegsadaan qaab lagu qasbo.
Dawladda Boqortooyada Midowday (UK) ayaa dib u dhigtay (lama kansalay) ballanqaadkeedii ahaa ilaalinta carruurta khadka tooska ah. Eeg tan warqad ka timid wasiiru dowlaha ku socota Xoghayaha Isbahaysiga Samafalka Carruurta ee Amniga Internetka. Ujeedada sharciga xaqiijinta da'da (Sharciga Dhaqaalaha Dijital ah, Qeybta 3) wuxuu ahaa in laga dhigo shirkadaha qaawan ee ganacsiga inay rakibaan barnaamijyo xaqiijinaya da'da oo wax ku ool ah si loo xakameeyo marin u helka carruurta ka yar 18 sano ee websaydhka qaawan ee ganacsiga. Fiiri tan blog ku saabsan wixii faahfaahin dheeraad ah. Shuruucda cusubi waxay raadinayaan in lagu daro baraha bulshada iyo sidoo kale boggaga internetka ee qaawan ee ganacsiga ku saabsan ee cusub Sharciga Waxyeellada Khadka Tooska ah laakiin taasi lama filayo inay diyaar noqoto ilaa 2023-24. Waxay dejin doontaa waajibaad daryeel. Xusuusnow, waxaad sidoo kale warqad ugu qori kartaa xubintaada baarlamaanka meelkasta oo aad joogtid kana dalban karto dowlada inay soo saarto sharci xaqiijinta da'da si caruurtaada looga ilaaliyo khadka tooska ah. Waa waajib saaran inay ilaaliyaan kuwa ugu nugul bulshada.
Tilmaanta Waalidiinta waxaa markii ugu dambeysay la cusbooneysiiyay 18 Febraayo 2021